ပိုက်ဆံ တသောင်း နဲ့ အိမ်ပိုင်ခြင်း (သို့) မြန်မာလူမျိုးတွေ ကို ပျားရည် နဲ့ ရောထည့်တဲ့ ဂျင်း – Let Pan Daily
ပိုက်ဆံ တသောင်း နဲ့ အိမ်ပိုင်ခြင်း (သို့) မြန်မာလူမျိုးတွေ ကို ပျားရည် နဲ့ ရောထည့်တဲ့ ဂျင်း
ငွေ ကျပ် ၁၀၀၀၀ တည်းနဲ့ အိမ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် အခွင့် အရေးတဲ့….။
ကျွန်မ အိမ်မက် ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်မို့ ကျွန်မမှာရင်တွေ ခုန်လွန်း…တုန်လွန်း လို့…စာဖတ်နေရင်း လက်တွေတောင်တုန်တယ်…။
ကိုပြည့်ဖြိုးကိုတောင် မတိုင်ပင်တော့ပဲ…. တစ်သောင်း နဲ့ ဖောင်ဝယ်ချင်စိတ်တွေလည်း ရင်ထဲအပြည့်….အခုက အောက်တိုဘာ ၈ရက်ဆိုတော့.. သူတို့ ဖောင်ရောင်းတာ သုံးရက်တောင် ရှိနေပြီပဲ….။
ဟယ် ကြည့်ပါဦး..ငါ့လိုပဲ အိမ်ပိုင်ချင်တွေ အများကြီးပါလား….။ တစ်သောင်း ရင်းလိုက်ရုံ နဲ့ ရမယ့် အိမ်ကလည်း သိန်းတစ်ထောင့် လေးရာကျော်တန် မီနီကွန်ဒို…နေရာကလည်း စမ်းချောင်းထဲ..အမလေး…ကြိုက်လိုက်တာ….။
တစ်ကယ်လို့ ကိုယ်မရလည်း တစ်သောင်းလောက်ကတော့ ရင်းပျော်ပါတယ်လေ… ကံကောင်းတဲ့သူ ရပါစေ… ။ တစ်ကယ်လို့များ အဲ့ဒီလို ကံကောင်းသူက ကိုယ်သာ… ဖြစ်ခဲ့ရင်….ကိုယ်သာ မဲပေါက်ခဲ့ရင် ဘုရားခန်းလေးကို စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်မယ်….ဘုရားခန်းကလည်း ကိုယ့်အကြိုက် အကျယ်ကြီးပဲ….အေးဆေးဘုရားရှိခိုး လို့ရပြီ…။ ပြီးတော့ …အခန်းကျယ်မှာ အမေတို့နေကြ…ကိုယ်တွေလင်မယားကတော့ အခြား အခန်း နေမယ်…သမီးတွေလည်း ပျော်ကြမှာ…အခန်းက၂၅ ပေ ပေ၅၀ ဆိုတော့…။
စိတ်ကူးတွေယဉ်လိုက်တာ ဆိုတာ… ကျွန်မမှာ စိတ်ကူးထဲမှာတောင်ပျော်လွန်းလို့။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မလိုချင်နေတဲ့ အိမ်အတွက် တစ်သောင်းငွေလွှဲပြီး ဖောင်ရဖို့ ကြိုးစားကြည့်တာ မမှားဘူးမဟုတ်လား….။
အဲ့ဒီ ခံစားမှုတွေ သယ်ဆောင်ပြီး ကျွန်မ အဲ့ဒီပေ့ကို သွားတယ်…စာတွေ အကုန်ဖတ် ဗွီဒီယို တစ်ချို့ သေချာသွားနားထောင်လိုက်တယ်…။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်မ ဘာသွားတွေ့သလဲဆိုတော့… ကျွန်မလိုပဲ…မျှော်လင့်ချက် တွေ တစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်နဲ့ လူတွေ…လောဘကိုအခြေခံထားသူတွေ…မနည်းမနောပဲ…။
ဖောင် နံပတ်လေး ရဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြတာ…စာပို့ထားတာ ဆင်းမ် ဖြစ်နေပြီ ….စာမပြန်ဘူးဆိုတာတွေနဲ့…ကျွန်မလို ပဲ…အဲ့ဒီ တစ်သောင်းကို ဆုံးလည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ ရလိုမှု တစ်ခုနဲ့ ငွေတွေ လု လွှဲနေတာတွေ…အဲ့ဒါကြည့်ပြီး အခု ရောင်းနေသူကို ဘာကိုယုံကြည်ပြီးငွေတွေ လွှဲနေတာလဲဆိုတာ ကျွန်မ အတွက် မေးခွန်း တစ်ခုလို ဖြစ်လာတယ်….။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ….ငွေလွှဲ ရောက်သွားရင်ကို ပျော်လို့ ကျေးဇူးတွေ တင်ထား လိုက်ကြတာ…။
ပြီးတော့ ရောင်းတဲ့သူကပဲ…သေချာ ရှင်းပြထားတယ်….။ သူတို့ လူ (၈)ယောက်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတယ် …ငွေလွှဲသူ… တစ်ယောက်ကို နှစ်မိနစ်နှုန်းဆိုတော့….လူ ၈ ယောက်နဲ့ဆိုရင် နှစ်မိနစ် တိုင်းမှာ လူ ၁၆ ယောက်ကို စာရင်း သွင်းပေးနေပါတယ်တဲ့…စပြီးဖောင်ရောင်းတာ အောက်တိုဘာ (၆) ရက်….အခုကအောက်တိုဘာ (၈) ဆိုတော့….အဲ့ဒီရက်အတွင်း နားချိန် ထမင်းစားချိန် အိပ်ချိန်တွေ ဖယ်ပြီး (၂) မိနစ်ကို (၁၆)ယောက်နဲ့ အကြမ်း တွက်ကြည့်တာ လူအရေအတွက်ကို ကျွန်မ အရမ်းလန့်သွားတယ်…..။
အခု စာရေးနေတဲ့ အချိန်ထိလည်း ငွေတွေ လုယက် လွှဲနေတုန်း….လွှဲတဲ့သူ ဘယ်လောက်များသလဲဆို…ဒီနေ့အဖို့ ငွေလွှဲ အမောင့်ပြည့်သွားလို့…အခြားကနေ လွှဲဖို့ အသိပေး ထားရတဲ့အထိ။ အဲ့ဒီလို ဖောင် ရောင်းတဲ့ ကိစ္စကို နိုဝင်ဘာအထိ တစ်လ တိတိ ရောင်းသွား မှာတဲ့ …ဘုရား..ဘုရား….။
ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ ဆက်ပြီး ကြည့်နိုင်စွမ်း မရှိတော့လို့… ကိုပြည့်ဖြိုးကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြပြီး သိချင်တာ တိုင်ပင်… မေးတော့….။ သူက သဲကလည်း အဲ့ဒါ…ဟိုး…ပဝေသဏီ ကတည်းက လုပ်လာတဲ့ နည်းလမ်းတွေ…တဲ့…။
သဲစဉ်းစားကြည့်လေ….တစ်ကယ် မဲဖောက်ပြီး ပေးမယ့် စေတနာရှင်အနေနဲ့ တွက်ကြည့်ကြမယ်…။ သူက ဖောင် နှစ်သောင်းပဲ ရောင်းတယ်ထား…. တစ်စောင် ဝယ်တဲ့သူမှာ သူ့ အခွင့်အရေးက နှစ်သောင်းမှာ တစ်ကြိမ် အခွင့်အရေး ရှိတယ်….။ အိုခေ….အခုတောင်…စာရင်းသွင်း မနိုင်အောင် ငွေတွေ လုသွင်းနေကြတာ….တစ်လ လုံးလုံး…သူရောင်းမှာ နှစ်သောင်း ပဲလို သဲထင်လား…ယုံလား ။
သုံးသောင်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်…. လေးသောင်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်… ဘယ်သူကများ စာရင်း သွားစစ်မှာမို့လို့လဲ….။ (အမလေး….ကြောက်လိုက်တာ…)
ပြီးတော့ အဲ့ဒီ ဝယ်တဲ့ အထဲမှာ…တစ်ဦးတည်းကနေ အစောင် ၅၀ -၁၀၀ ဆိုပြီး လောဘတွေနဲ့ ဝယ်သူ လည်း ရှိနိုင်တယ်….အဲ့ဒီမှာလည်း အရမ်းများနေပြီနော်….။ နောက်ဆုံး သူပြောသလို တစ်ကယ်ပေးမယ်…. တစ်ကယ် လှုတယ်ပဲထား….သူ သိန်းကို ထောင်ချီ မြတ်နေပြီ…။ တိုက်ကလည်း တစ်ကယ် အဲ့လောက်တန်နေသလားမသိသေးဘူးနော်….။
ဒါက လုံးဝ အမှန်အကန်အနေနဲ့ တွက်ကြည့်တာ…။ ကိုပြည့်ဖြိုး စကားဆုံးတော့ ကျွန်မ ရင်ထဲ…တ ဆစ်ဆစ်….။
ပြီးတော့… ငွေတွေ လု လွဲနေသူတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ နောက်ထပ် အတွေးဆိုး တစ်ခုထပ်တွေး မိတယ်…. အခု ငွေ လွှဲနေတာတွေက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးက… အများအားဖြင့် ရန်ကုန်က ဖြစ်ဖို့များပေမယ့် ကျွန်မတို့ သူတို့ ဘယ်သူတွေဆိုတာ မသိသလို ဘယ်ကလဲ… ဘာလဲဆိုတာလည်း လုံးဝစိတ် ဝင်စားကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ….။
အဲ့ဒီတော့….အဲ့ဒီ တိုက်ခန်းရမယ့်သူ… မဲပေါက်သူဟာ….တစ်ကယ် ကံစမ်းသူရောဟုတ်ပါ့မလား…ကိုယ့်လူကိုယ် ပြန်ပေးပြီး ပေါက်တယ် လုပ်ခဲ့ရင်ရော….။ အခုငွေလွှဲသူတွေထဲက ဘယ်သူကများ ကွန်ပလိန်းရဲမှာတဲ့လဲ…။
အရင်ကတည်းက ဘာကို ယုံကြည်ရမယ်..မယုံရဘူးဆိုတဲ့ အချက်လက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ကံစမ်းခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ….ကိုယ့် ရှေ့မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ မီနီကွန်ဒို လှလှလေးကို ပဲ မြင်ပြီး…လိုချင်စိတ်နဲ့ ကံစမ်းဖို့ မဆိုင်းမတွ ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား….။
သူတို့ရမလား…ဘယ်သူရမလဲ မသိပေမယ့်…တစ်ယောက်ယောက် သိန်းထောင်ချီ ရသွားရင်လည်း… ကိုယ်ပေးလိုက်ရတာက မာလာရှမ်းကော တစ်ပွဲစာပဲ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကံစမ်းမဲ တစ်စောင်..တစ်သောင်းဆိုတဲ့ ငွေကို လွှဲနေသူတွေိသလို…. တစ်ပတ်စာ ထမင်းဖိုး တွေနဲ့ ငွေလွှဲနေသူတွေလည်း ရှိမှာပါ…။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်….အခု ငွေတွေ လုလွှဲနေသူတွေက… လောဘ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ကြဘူး….မိသားစု အတွက် အိမ်ပိုင်လေး ရချင်လို့…အိမ်လေးများ ရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေး နဲ့….။
ကျွန်မ အဲ့ဒီပေ့ချ်ကို ထပ်မကြည့်ရဲ…ဖိုင်တွေ ထပ်မကြည့်ရဲအောင် ရင်ထဲ ဆို့နင့်နေတယ်….။ အခု စာရေးနေရင်းတောင်….လက်တွေတုန်လာတယ်… ဒီတစ်ခါ တုန်တာက ရင်ခုန်လွန်းလို့ မဟုတ်တော့ဘူး… စိတ်တွေမကောင်းလွန်းလို့…. မွန်းကြပ်လွန်းလို့ ။
အိမ်မှာ ၊ ဆိုင်မှာ လာဘ် တိတ် နေ လျှင်
မြန်မာပြည်တွင်း မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးဖို့ ခက်သွားရင် ဖုန်းထဲမှာ အသင့်ဆောင်ထားရမယ့် VPNဆော့ဝဲတွေ အကြောင်း (မသိသေးသူများအတွက် ပြန်shareပေးပါ)